Vanyori vakazvarwa muna Zvita. Mamwe emashoko ake ezuva rega rega | Zvazvino Zvinyorwa
Mumwezve december, rimwe gore, kumwe kuvhara uye imwe balance. Mwedzi wekutonhora (unofungidzirwa) uye Kisimusi. Uye mwedzi wekuzvarwa kweadiki mukirasi. Kune vazhinji vanyori vakuru vakazvarwa muna Zvita, saka ini ndinoita ongororo uye ndinoratidza zvimwe zve mashoko kuti vakatisiira ramangwana.
5.1 Chechishanu Horacio Flaco
11.3 Firipi K. Dick
Kukundwa kwenyika chikamu chikuru hakune chinhu kunze kwekuitora kubva kune avo vane ganda rakasiyana kana mhino dzakapfava kupfuura zvatinoita.
Uye kamwe kamwe kugutsikana kukuru kwakandipinda, ndichifunga nezvekuchengetedzeka kukuru uko kunopihwa negungwa kana tichienzanisa nematambudziko ari panyika, uye kana tichifunga nezvechisarudzo changu chekutora hupenyu uhu husingazondipe kumatambudziko anovhiringidza, hupenyu hwakarembera elemental hunhu hwehunhu hwayo hwakazara uye nekureruka kwezvinangwa zvayo.
Iyo chaiyo nyika yekumusha yemunhu hudiki.
Tarisa kudzika kwezvinhu; Irony haimbodzike ipapo.
Rudo rwune maviri ega anochengetedza, anogumira uye anoedza kuita kuti mumwe afare.
Iwo anonyanya kufungira mhinduro ndeyekuti iwe unoawana chero paunoda.
Ndiri ani ini kuti ndiise itsvo paari, sebhiza rangu chairo, wandichava mangwana?
Hupenyu hwakarerukira moyo: hunorova uchigona.
Hatisi kusuwa vanhu vatinoda. Chatinosuwa chikamu chehupenyu hwedu chinoenda navo, icho chisingazovapo kana vasipo.
Chechishanu Horacio Flaco
Zuva rega rega hupenyu hushoma.
Hapana chinhu chisingasviki kumunhu anofa.
Iyo amphora inogara ichichengeta kunhuwirira kwewaini yekutanga yaakachengeta.
Kana ini ndakadzidza chimwe chinhu muhupenyu, hakusi kupambadza nguva kuyedza kushandura nzira yekuve yevamwe.
Munhu ihwo hwega boka revanhu, vachitsvaga kuvapo kwevamwe kuti vafunge kuti tiri tese tiri pamwechete.
Uchapupu hwevakadzi ndewe kuona kunze kubva mukati. Kana paine humwe hunhu hunogona kusiyanisa hurukuro yevakadzi, ndiyo furemu.
Usahwande kuseri kwezera, ndiko kukweva kwaunoita. Vechidiki mamiriro epfungwa.
Nzira dzese dzinonditungamira kugehena. Asi kana gehena riri ini! Kana, kunyangwe rakadzika sei gomba rayo rakadzika, ndine mukati mangu chimwe chinotyisa!
Bhuku rakanaka ihwo hupenyu hunokosha hweruzivo rwemweya wehunyanzvi, wakaomeswa uye wakakosheswa nechinangwa chekupa hupenyu kupfuura hupenyu.
Kune avo vakadzora maziso evanhu, vazvidzei nekuda kwekupofumadza kwavo.
Iyo ramangwana rehunyanzvi rinotyisidzira kuparadza zvese zviri mumunhu, asi tekinoroji haisvike kupenga, uye mairi ndimo munotizira munhu wemunhu.
Zvese zvatinoziva nezverudo ndezvekuti rudo ndirwo ruripo.
Hapana imwe frigate inotitora kwese senge bhuku.
Rudo igwa rine vaviri vakasiyana rudders, uye rakagadzirwa kutakurwa pakati pemaviri ...
Iyo wachi yecommunism yamira kukaka. Zvisinei, kuvakwa kwayo kwekongiri hakusati kwawa. Nechikonzero ichocho, panzvimbo pekuzvisunungura pachedu, tinofanira kuedza kuzviponesa kubva pakupwanywa nemarara ayo.
Chishuvo chemunhu chekuzvarwa nerusununguko hachikundiki; inogona kupwanywa asi isingatsakatiswe.
Dai Mwari aida kuti vanhu vamhanye, angadai akavaita vanoyevedza mutracksuit.
Vanyori vanogara chaiko mupfungwa uye mumahotera emweya.
Kure hausi chinhu kana paine chikonzero chikuru.
Ndine chokwadi chekuti pasi rose rakazara nehupenyu hwakangwara. Kungoti wanga wakangwara zvekusvika pano.
Firipi K. Dick
Ndinoifarira, ndinogona kuitarisa kweupenyu hwese. Mazamu ake anonyemwerera.
Chishandiso chakakosha pakubata chokwadi kumanikidza kwemazwi. Kana iwe uchikwanisa kudzora zvinoreva mazwi, iwe unogona kudzora vanhu vanofanirwa kushandisa mazwi.
Iwe hausi kuenda, mudiwa wangu, uye kana iwe ukaenda, uchiri kusiya rudo rwangu, haungambobva.
Ini ndinogara ndichitaura kuti runako chinongova chivi chakadzika.
Zvakare gungwa, nhasi,
mweya wake uzere nekukura.
-Unogona kunzwa kuyaruka
izere nezvimedu zvezvimedu
uye yekufamba kwakasviba kwakasviba.
Chii chawakanditeedzera mauri,
iyo painoshaikwa mandiri
Mufaro! Iko hakuna izwi rine zvimwe zvinoreva; mumwe nemumwe anozvinzwisisa nenzira yake.
Kwemakore manomwe ndakafamba siku nesikati ndichingobatwa chete: iye. Dai paive nemuKristu akatendeka kuna Mwari seni ndaive kwaari, nhasi tese tingave Jesu Kristu. Masikati neusiku aifunga nezvake, kunyangwe paaimubiridzira.
Hupenyu hwaive hwemhirizhonga uye husingazive parizvino apo vatambi vakaita nhamo yaakange asinganzwisise, uye varume vacho, vakasvika pachimiro chehungwaru, vakafungisisa chiitiko ichi nekutarisisa kunonzwira tsitsi uye kuzvipira.
Pane zvinhu zviviri zvakakura kupfuura zvese. Chekutanga rudo uye chechipiri ihondo… Uye sezvo tisingazive kuti hondo ichaperera kupi, mudiwa, ngatitaurei nezverudo…
Kana iwe ukazadza inonaka uye neminiti miniti yemakumi matanhatu masekondi iyo inokutora iwe kuenda kudenga ... Pasi rese rino richava dunhu rako uye kunyanyisa, uchave uri murume, mwanakomana wangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori vakazvarwa muna Zvita. Mamwe emazwi ake ezuva nezuva